Ngibabuyekeza kanjani abashayeli bezimangaliso? - Abashayeli
Main > Abashayeli > Ukuvuselelwa komshayeli we-Miracast - izixazululo ezisebenzekayo
Ukuvuselelwa komshayeli we-Miracast - izixazululo ezisebenzekayo
Ngibabuyekeza kanjani abashayeli bezimangaliso?
Khetha umphathi wedivayisi. Lapho iMenenja yedivayisi isivulekile, bheka i-adaptha yokubonisa. Yandisa ngokuchofoza umcibisholo (>) ukhombe ngakwesokudla. Qhafaza kwesokudla kwi-HD Graphics yakhoumshayelibese ukhethaBuyekeza i-DriverIsoftware.
Kulesi sifundo esisheshayo, ngizokukhombisa ukuthi ungaqinisekisa kanjani ukuthi womabili ama-monitors axhunywe kwi-Blade kahle kudivayisi yakho, ngakho-ke lokhu kungaba isifundo esilula, futhi sizongena ngqo bese siqala ngokuvula imenyu yokuqala futhi ukungena kuzilungiselelo faka uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lwesitolo ofuna ukusishiya chofoza kulo, ngakho-ke manje ewindini lezilungiselelo ofuna ukukwenza ukushiya ngokuchofoza ku-tile yohlelo kufanele kube eyokuqala ebhalwe lapha futhi akumangazi uma ungakwenzi bona okukodwa nokubili, uma konke okubonayo kuyibhokisi elilodwa okusho ukuthi kuzobhekwa iso elilodwa kuphela, iningi lenu okufanele ngabe liyazi ngenkathi ningena kule ndatshana, kepha uma ngasizathu simbe ungakhombisi umzuzwana unga ube ne-Quickland lapha bese uyikhomba mina ngizokutshela ukuthi imuphi umqapha okhombisa njengamanje noma yimuphi owubukayo njengamanje, futhi uma uyithanda, yiya kuleyo nkinobho yokubamba, izozama ukuthola enye uma okwamanje ungakwazi kufanele ithi isikhangiso asibonwa nokuthi sizamile ukuxazulula kulesi sifundo t namuhla ngizovala iwindi lesethingi, uma sesikutholile lokho futhi ngiya kwimenyu yokuqala ngizo thayipha umphathi we-indevice, umdlalo omuhle kakhulu ovelayo kufanele ubone umphathi wedivayisi ekhombisa ngenhla kwephaneli yokulawula, engiyithandayo chofoza kukho ngakho-ke manje ufuna ukungena kuzamazama kwesokunxele semenenja yedivayisi futhi wandise ukubukwa kwamakhadi emidwebo ngokuchofoza kabili kumakhadi emidwebo noma ngokuchofoza ngakwesobunxele umcibisholo omncane oseduze kwawo. Lapho uvuselela isoftware yomshayeli, uzobuzwa ukuthi ufuna ukusesha kanjani isoftware yokushayela.
Qhafaza kwesobunxele uhlole ngokuzenzakalela isoftware yomshayeli ebuyekeziwe ngakho-ke vele ubekezele. Thatha isikhashana ukuthi isho ukuthi isoftware ehamba phambili yedivayisi yakho isivele ifakiwe iWindows inqume ukuthi isoftware yomshayeli yedivayisi yakho isisesikhathini. Ngincoma ukubuyela kuleli windi lezilungiselelo bese sibona ukuthi singakwazi yini ukuthola i-monitor yesibili kuleli phuzu, uma usenezinkinga, ungaya ku-inthanethi futhi ulande ngesandla isoftware yomshayeli.
Ngakho-ke uma uzibuza ukuthi ungakwenza kanjani lokho, empeleni ungachofoza kwesokudla okuboniswayo, bese uchofoza Izakhiwo, bese uya ngaphansi kwethebhu yokushayela phezulu. Lapha uzokhonjiswa inguqulo yomshayeli elandelwa igama lomshayeli ngenhla ezimweni eziningi kumane nje kuyi-Nvidia AMD Intel okuthile kulayini bese uzongena ku-inthanethi ngesandla bese ubheka labo bashayeli. Ngakho-ke uma ufuna ukuthatha indlela ezenzakalelayo kuyo, kulula kakhulu uma sivala iVice Manager ngakho-ke uma uvula isiphequluli sewebhu lapha ngathi sizilanda isoftware yomshayeli ngokwethu, ake sithi sizo zama okukodwa Ukulanda amashayeli we-AMD futhi uzokuphindaphinda kahle lokhu kunoma iyiphi isoftware yomshayeli oyifunayo, kepha ake sithi i-AMD yinkampani yethu lapha, ngakho-ke sizobe senza izibuyekezo zokushayela ze-AMD noma enye into, akunjalo Akufanele sifane ncamashi nabashayeli Abangaphansi Kokulanda ekhasini le-Google sibheke okuncane kwalesi sici somshayeli we-autodetect, ongasithola ngqo kuGoogle, ngakho-ke siyakuvula lokho futhi okuningi eyodwa inethuluzi lokuthola umshayeli elizenzakalelayo, ngakho-ke ubukade usushiye u-Chofoza lapha kunkinobho yokulanda.
Hlala wazi ukuthi ngokusobala ngeke ulande amashayeli we-AMD wamakhadi emidwebo ye-NVIDIA nento efanayo. Ngakho-ke ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uvala isitolimende somshayeli, futhi kuleli qophelo ngincoma ukuthi kuvuselelwe leli thuluzi uma lingayilungisi inkinga yakho ngokuqinisekile ngincoma ukuqala kabusha lonke uhlelo lwakho bese ngethemba ukuthi umqaphi wesibili uzokwaziwa kulokhu iphuzu ngakho ngithemba ukuthi lesi sifundo esifushane sikusizile ukuthi niphume futhi ngizonithola bye bye kahle esihlokweni esilandelayo
Ngisifaka kanjani isimangaliso ku-PC yami?
1 Hlola i-Computer ukutholaI-MiracastUkusekela
Khetha Imenyu Yokuqala, bese ukhetha Amasethingi.
Khetha okuthi Khombisa ngakwesobunxele.
Bheka ngaphansi kwesigaba se-Multiple Displays se-'Xhuma kwisibonisi esingenantambo '.I-MiracastKutholakala Ngaphansi Kokuboniswa Okuningana, uzobona 'Xhuma kusibonisi esingenantambo'.
Ukhiphe kangaki ifoni yakho ukudalula izifinyezo zakamuva zeholide? Noma uke wayibuka i-movie yakho oyithandayo kusikrini esincane se-laptop? Ukujaha akubukeki kujabulisa ngamasentimitha ama-2 ubude. Sawubona, igama lami nginguChi kusuka kuleyo Windows Media Team. Ubuwazi ukuthi umlingo wokuqagelwa okungenantambo ku Windows 10 yenza kube lula ukukhulisa isikrini sakho? Asikho isithupha esiluhlaza esidingekayo.
Cabanga nje uma ungaphrojusa okuqukethwe kwidivayisi yakho ye-Windows kusikrini esikhudlwana, umsebenzi wakho, izinkumbulo zakho, noma wenze ukuzijabulisa kwakho kusihlwa kube nomoya. Bona okufunayo, noma kunini lapho ufuna khona, esikrinini esikhulu ngokufunda ukuthi ungakusebenzisa kanjani ukuqagela okungenantambo kweWindows. Kunamadivayisi amaningi ahlukahlukene ongawaxhuma ngaphandle kwentambo.
Ake ngikubonise okudingayo ukuze ukwenze kusuka kukhompyutha yakho ephathekayo uye kusibonisi esingenantambo. Okokuqala, kufanele uqiniseke ukuthi idivayisi yakho yamanje ihlangabezana nezidingo. Windows 10 kufanele ifakwe kuqala kwi-laptop noma kuthebhulethi yakho ukuze usebenzise ukuqagela okungenantambo, ne-PC yakho yedeskithophu uma ifaka ikhadi le-Wi-Fi.
Ungaqinisekisa ukuthi idivaysi yakho isekela ukuqagelwa okungenantambo ngokucindezela ukhiye weWindows noK. Uma ngabe idivayisi yakho ingakusekeli ukuqagela okungenantambo, lokhu kuzoboniswa kule menyu. Uma ufuna ukwenza iphrojekthi ngaphandle kwentambo - i-TV yakho, iprojektha noma ngisho nokuqapha ideskithophu - kufanele kusekele iMiracast.
Abamukeli beMiracast bayakusekela lokhu. Qiniseka ukuthi okwivezelayo nalokho okuvelelayo kuxhunywe kunethiwekhi efanayo ukuze isebenze kahle kakhulu. Bonke abakhiqizi bedivayisi bahlukile, kepha ungabheka amanethiwekhi ngokuya kumasethingi enethiwekhi kudivayisi yakho, ngine-Windows 10 laptop ne-LG TV.
Ngizulazulela kwimenyu yezilungiselelo zenethiwekhi futhi ngiqinisekisa ukuthi womabili amadivayisi axhunywe kunethiwekhi efanayo. Kuhle ukuhamba! Kuthiwani uma i-TV yakho ingakusekeli ukuqagela okungenantambo? Cabanga ngokutshala imali kudongle le-Miracast. Ixhuma ngemuva kwe-TV yakho njengebhokisi lekhebula noma isidlali se-BluRay.
Sesha i-Bing noma uye ku-Microsoft Store - Easy Qiniseka ukuthi yonke into oyithengayo iyi-Wi-Fi CERTIFIED ™ yobuchwepheshe be-Miracast®. Uma usuqinisekisile ukuthi idivayisi yakho ihlangabezana nezidingo ezidingekayo, cindezela ukhiye we-Windows no-K ukuvula imenyu yokuxhuma, futhi iWindows izoqala ukufuna izibonisi ezingenantambo nomsindo, okungaba umbukiso wegumbi lenkomfa, ithelevishini, noma okunye ukuqapha kube . Khetha isibonisi osifunayo futhi iWindows izoxhuma kuso ibonise isikrini sakho se-laptop.
Ungahle uthande ukuzulazula noma udwebe esikrinini esicatshangelwe ngesikhathi sesethulo sakho. Ungavumela ukufaka igundane, ikhibhodi, ukuthinta, nokufaka ipeni kusuka kule divayisi ukuze unike amandla izici zokuthinta kusuka kumadivayisi wakho njenge-Surface Hub. Ukuqagela okungenantambo kukuvumela ukuthi ukhethe uxhumano olufanele lomsebenzi.
Uzobona phezulu kubha yokulawula isikrini ekhombisa isimo soxhumano lwakho. Ungazivumelanisa kahle nomsebenzi wakho. Ngenkathi imodi ezenzakalelayo kungukuthi 'Sebenza', ungakhetha futhi okuthi 'Dlala' noma 'Buka Amavidiyo'.
Uma ungazizwa uthanda ukushintshela emuva naphambili phakathi kwamamodi, ungakhathazeki: Qhubeka nokusebenza kuzolungela imisebenzi eminingi. Uqedile ngokuqagela, ungavele unqamule idivayisi yakho kubha yokulawula noma kwimenyu ye-Connect, noma ngabe uyakwenza Uma ukhohlwa ukwenza lokhu, ukubonakala okungenantambo kuzomisa ngokuzenzakalela ngokushesha nje lapho uvala idivayisi yakho noma uphuma egumbini lapho uyahlola. Sithemba ukuthi uthole ukuthi le ndatshana ilusizo.
Sicela usazise impendulo neziphakamiso zakho ngokuchofoza ku-Sebenzisa Impendulo Hub ngokucindezela ukhiye we-Windows, bese ukhetha i-Display and Graphics> I-Wireless Display ne-Broadcast. Siyabonga ngokubuka futhi ube nosuku oluhle!
Ngisilungisa kanjani isimangaliso esingasebenzi?
Lungisa ukuxhumanaekubonisweni okungenantambo noma emachwebeni
Qiniseka ukuthi yakho Windows 10 idivayisi iyasekelaI-Miracast. ...
Qiniseka ukuthi i-Wi-Fi ivuliwe. ...
Qiniseka ukuthi isibonisi siyasekelaI-Miracastbese uqinisekisa ukuthi ivuliwe. ...
Qiniseka ukuthi abashayeli bedivayisi yakho basesikhathini futhi i-firmware yakamuva ifakwe kwisibonisi sakho esingenantambo, i-adaptha, noma idokhu.
Ngingakwazi ukufaka isimangaliso ku Windows 10?
I-Windows 10inikeze ikhono lokulingisa isikrini sakho kunoma iyiphi i-dongle noma idivaysi (ibhokisi lokusakaza, i-TV) elihambisana nokuthandwaI-Miracastejwayelekile selokhu yethulwa ngo-2015.IMicrosoft'sI-OS manje ivumela ifayela lakho le-PCube yiisibonisi esingenantambo, ukutholaI-Miracastamasignali avela ocingweni, ithebhulethi noma okunyeI-Windows 10i-laptop noma ideskithophu.Juni 4, 2021
Ngimvuselela kanjani umshayeli wami weMiracast ku Windows 10?
IMiracast isici esakhelwe ngaphakathi ku Windows 10 idivayisi, ukuze ukwazi ukuvuselela umshayeli wayo ungalandela lezi zinyathelo: Qhafaza kwesokudla kusithonjana seWindows ezansi kwesobunxele kwesikrini sakho. Khetha umphathi wedivayisi. Lapho iMenenja yedivayisi isivulekile, bheka i-adaptha yokubonisa.
Ngidinga abashayeli abanjani beMiracast?
Ukuboniswa okungenantambo (Miracast) kungasekelwa kuphela yiWindows Display Driver Model (WDDM) 1.3 namamodeli wakamuva. Indlela elula yokuvuselela umshayeli wakho ongenantambo we-Intel nesoftware ukulanda nokufaka i-Intel Driver Update Utility Tool. Leli thuluzi lihlola ngokuzenzakalela futhi livuselele abashayeli bakho enguqulweni yakamuva.
Kungani iMiracast yami ingasebenzi kukhompyutha yami?
Uma iWindows PC yakho isekela iMiracast, sicela ubheke i-athikili Lungisa ukuxhumana kwizibonisi ezingenantambo noma emachwebeni ukulungisa inkinga. Ngithanda ukukwazisa ukuthi abashayeli abafakwe ngumenzi ngeke balahleke.
Ngabe i-Miracast interface iyasekelwa ku-Windows 8.1?
I-Miracast display callback interface iqukethe imisebenzi efakwa yi-Microsoft DirectX graphics kernel subsystem yokuxhasa ama-wireless (Miracast). Lokhu kusebenzisana kusekelwa kusuka ku-Windows 8.1.